ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ပိုမိုအားေကာင္းလာျပီး မုန္တိုင္းတစ္ခုုျဖစ္လာႏိုင္...! - Thadin
HomeNEWSေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ပိုမိုအားေကာင္းလာျပီး မုန္တိုင္းတစ္ခုုျဖစ္လာႏိုင္…!
April 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ပိုမိုအားေကာင္းလာျပီး မုန္တိုင္းတစ္ခုုျဖစ္လာႏိုင္…!
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ေပးရန္အလားအလာ။
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ ေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တ ြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ျဖစ္ေနျပီး၊ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၁၅) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ။ (၁၄-၄-၂၀၁၉)ရက် နံနက် (ဝ၉းဝ၀) နာရီအချိန်KALPANA_1ဂြိုဟ်တုမှတိုင်းတာပေးချက်အရ၊ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော် တောင်ပိုင်း တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်း နေပြီး၊ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တို့မှာ တိမ် အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်း နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ တိမ်အသင့် အတင့် ဖြစ်ထွန်း နေပြီး၊ကျန်ဒေသတွေမှာ တိမ်အနည်းငယ် မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်း နေပါ တယ်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ လှိုင်းအနည်း ငယ်သာ ရှိပါမယ်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ လှိုင်း အမြင့် (၁) ပေခန့် မှ (၂) ပေ ခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တို့မှာ 26°C မှ 32°C ခန့်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး(အထက်ပိုင်း) နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် 33°C မှ 36°C ခန့်၊ ကျန်ဒေသတွေ မှာ 37°C မှ 41°C အထိရှိ နိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွှန်းကိန်းများအခြေအနေ။၊တစ်ပြည်လုံး မှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်း ကိန်း လွန်ကဲအဆင့် တွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်။ကချင်ပြည်နယ် မှာ နေရာကျဲကျဲ၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (အထက်ပိုင်း) နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တို့မှာ နေရာကွက်ကျား ထစ်ချုန်းရွာ နိုင်ပြီး၊ ကျန်ဒေသ တွေမှာ တိမ်အနည်း ငယ် မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်း နိုင်ပါတယ်။
နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ နေရာ ကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါတယ်။
This Month : 33361
This Year : 174818
Total Users : 533842
Total views : 2414652